Home Wararka Qaar kamida ciidankii gadooday oo u guuraya meel aan ka fogaynin Muqdisho
Qaar kamida ciidankii gadooday oo u guuraya meel aan ka fogaynin Muqdisho
Sida uu sheegayo heshiiskii dhawaan la gaaraya, maanta ayaa waxaa la filayaa in ciidamada isku horfadhiyey magaalada Muqdisho ay dib ugu noqdaan xeryahoodii, kaddib markii shaley Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu booqday goobaha fariisinka u ahaa ciidamadan.
Ciidankaan ayaa la sheegayaa in ay u guuri doonaan meel aan ka fogaynin magalaada Muqdisho, gaar ahaan ciidanka ka so baxay degeenada Gobolka Shabeellada Dhexe. Ciidankaan iyo siyaasiyiintya taageersan ayaa wali waxa ku jira shaki ah in Farmaajo laga yaabo in u dib ugu gurto heshiis uu horay u gakay.
Waxaa shalay laga qaaday Waddooyinkii magaalada dhifeysyadii carada ahaa, waxaana maanta la dhameystirayaa howshaas sidaasi waxaa laanta Afka Soomaaliga ah VOA u sheegey Gaashaanle Diini Rooble Ahmed oo ah afhayeenka ciidamada dowladda ee la baxay Badbaado Qaran.
Dhanka kale Goobaha dib loo furay ee difaacyada u yaalleen Ciidankii muddo kororsiga ka soo horjeeday ayaa kala ahaa Xaafadaha Siigaale, Barmuudo illaa aagga Mirinaayada. Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa ku wareejiyay goobaha la furay ee jidka Mirinaayada ciidanka Booliska, iyadoo uu goobjoog ka ahaa Taliyaha Booliska.